Dọrọ Chain, USB ụgbọelu, Energy Chain - Anjie
Mt usoro (Site 5mm * 5mm - 60mm * 300mm)
MTK usoro (Site 20mm * 30mm - 65mm * 300mm)
SK usoro (Site 25mm * 38mm - 45mm * 150mm)
VMTK usoro (Site 25mm * 30mm - 80mm * 300mm)
King James Version usoro (10mm * 6mm & 10mm * 16mm)
VSK usoro (Site 18mm * 30mm - 45mm * 100mm)
Tub usoro (Site 40mm * 50mm - 50mm * 100mm)
MTS usoro (Site 35mm * 50mm - 45mm * 250mm)
USB yinye - MTK
USB yinye - VMTK
Anyị ọhụụ na otú na-edozi nsogbu anyị ọrụ na-azọpụtanụ-eri n'ihi na ndị ahịa anyị. Quality na ọrụ bụ anyị ebighi ịta.
Anyị na-elekwasị anya na ezi ọrụ. Sales alo ọrụ na mgbe ahịa ọrụ. Nzube anyị nyere na oge na ihe ọmụma ziri ezi niile nke ndị ahịa anyị ma ọ bụ ndị ọbịa.
Quality mbụ bụ anyị echiche. Anyị na-etinye tupu mkpa àgwà akara. N'otu oge anyị na-agbalị nnọọ ike ịchịkwa anyị price n'ime ezi uche akporo.
Anyị nwetara ihe karịrị 13 afọ ahụmahụ na mmepụta nke ikpuru yinye, ndu okporo ígwè bellow cover, naịlọn corrugated bellow anwụrụ na yiri ngwaahịa.
Shijiazhuang agile ụlọ ọrụ na-ike kemgbe 2008. Anyị nwetara ihe karịrị 13 afọ ahụmahụ na mmepụta nke ikpuru yinye, ndu okporo ígwè bellow cover, naịlọn corrugated bellow anwụrụ na yiri ngwaahịa. Anyị na ngwaahịa na-elekwasị anya na cable nchedo, okporo ígwè nchedo na reciprocating ngagharị.
Anyị nwetara banyere 100 ọrụ na anyị factory emi odude ke Yanshan asị nke Hebei anāchi achi, na nwetara banyere 6500 square mita 'mmepụta ebe. Anyị ọrụ na-emi odude na Shijiazhuang obodo, na 300 square mita 'ebe. Ọ bụ banyere 400 kilo mita si Beijing maka ọnọdụ.
OZI OF US
Na nkwado nke ndị ahịa anyị si mba ọzọ na anụ ụlọ, na mgbalị maka afọ 13 edebe rụọ nke ngwaahịa mma na ngwaahịa na ọrụ, anyị na-na-na-ọzọ na ndị ọzọ siri ike na-dị ka ihe nka na USB na ndu okporo ígwè nchedo ụlọ ọrụ.
ShanghaiTex 2019 exibition jide na 2019.11.25
Ahịa ịjụ ajụjụ banyere USB ụgbọelu. Ekwurịta okwu na akụkụ na nwụnye maka ...
100 mita n'ebe ọwụwa anyanwụ nke nkwụsị n'etiti 307 mba inyeaka ụzọ na Tianshan n'okporo ámá, elu-tech mpaghara, Shijiazhuang.
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa
Ọdụdọ USB Chain, Plastic USB Dọrọ Chain, USB Waya Chain, CNC USB Dọrọ Chain , USB Dọrọ Chain , USB Chain,